YAAB!!: Garsoorihii Ciyaartoyga Ka Aarsaday Oo Ugu Danbayn Sharaxaad Ka Bixiyay Sababtii Uu Ibrahimovic Ugu Diiday Kubbadii Uu Saddexleyda Ku Dhaliyay. - GOOL24.NET
YAAB!!: Garsoorihii Ciyaartoyga Ka Aarsaday Oo Ugu Danbayn Sharaxaad Ka Bixiyay Sababtii Uu Ibrahimovic Ugu Diiday Kubbadii Uu Saddexleyda Ku Dhaliyay.
November 12, 2018 Mahamoud Batalaale
Ma xusuusataa garsoore Tony Chapron? Haddii ay jawaabtu maya tahay, waa garsoorihii bishii January 2018 saxaafada aduunka ciwaanada ugu waa wayn ka abuuray kadib markii uu si layaableh uga aarsaday ciyaartoy isla markaana laag ku jiiday isaga oo waliba markalena kaadhka cas u taagay.
Dhacadan waxaa ka horaysay mid kale oo uu garsoore Tony Chapron uu ku sameeyay joog dheeraha reer Sweden ee Zlatan Ibrahimovic kadib markii garsoore Tony Chapron uu go’aan ku gaadhay in uu Ibrahimvic si badheedh ah uga celiyay in uu qaato kubbad uu saddexley kaga dhaliyay kulan uu u ciyaarayay PSG.
Garsoore Tony Chapron ayaa lix bilood lagu ganaaxay kadib markii uu si badheedh ah u laagay xidiga kooxda Nantes ee Diego Carlos kaas oo waqti yar ka hor garsooraha ay isku dhaceen laakiin garsoore Champron ayaa gabi ahaanba iskaga fadhiistay shaqadii garsoorenimo.
Haddaba garsoore Tony Chapron ayaa waraysi uu bixiyay waxa uu ugu danbayn sharaxaad kaga bixiyay sababtii dhabta ahayd ee uu Ibrahimovic kaga hor joogsaday kubbadii uu saddexleyda kaga dhaliyay kulankii PSG ay guusha wayn ka gaadhay kooxda Lorient ee kulankii bishii March 2015 kii.
Waraysi dheer oo uu bixiyay Tony Chapron ayuu BBC World Football Podcast waxa uu uga jawaabay su’aalo badan wuxuuna ugu horayn ka hadlay ciyaartoyguu laaga la tiigsaday wuxuuna yidhi: “Anigu maan doonayn in aan isaga laago, waxay ahayd murugo sababtoo ah waxaan waayahaygii garsoorenimo ku dhamaystay ciyaartan, xaaladan. Waa wax adag in la aqbalaa kadib marka aad garsoore ahayd 1500 oo kulan, sababtoo ah waxa uu waqtigu ahaa mid dareen la’aan ah”.
Tony Chapron oo dhacdadan ka sii hadlaya ayaa yidhi: “Anigu bini aadam ayaan ahay, waxaanan dareemay xanuun, waanan cabsaday, waan daalanaa, muu ahayn weerar. Kaliya waan dhacay, qof ayaa i riixay, aniguna si murugo leh ayaan lugtayda u soo saaray.
“Dabcan falcelintii ciyaartoyda iyo tababaruhu waxay ahayd sax, ninkani qalad ayuu sameeyay, laakiin saxaafada iyo baraha bulshada wax wayn ayay u ahayd, sababtoo ah garsooraha waxaa waajib ku ah in aanu sidaas udhaqmin, waan ku waafaqay raali galin ayaanan bixiyay”.
Intaa kadib Garsoore hore Tony Chapron ayaa sharaxaad ka bixiyay qaabkii ay u dhacday arintii Ibrahimovic dhex martay ee uu kubbada uu saddexleyda ku dhaliyay u diiday iyo waliba qaabka uu ka doonayay Ibrahimovic.
Tony Chapron ayaa yidhi: “Aniga ayuu ii yimid oo uu igu soo dhawaaday, kaliya wuu ii suul dhabaaleeyay(farihiisa ayuu kaga shan qadhiyay) wuxuuna yidhi:’Kubbada”. Anigu waxaan leeyahay afar hablood, marka aanu wada joogno ee ay wax dalbadaan, haddii aanan dhamaadka hadalka ku darin kalmada “Fadlan” ma jiro wax fal celin ahi”.
Tony Chapron oo sharaxaadii dhacdadii Ibrahimovic sii wada ayaa yidhi: “Sidaa daraadeed, waa isku mid, waa nooc ka mid ah tacliinta, waxaan filayaa in ay ahayd nooc ixtiraamka ah. Waxaa jira wax bulshada ka qaldan, haddii aan ilawno halmadaha sahlan ee “Fahdalan” iyo “Mahadsanid”.
Ugu danbayn Tony Chapron ayaa ku dooday in dhacdadani ay ahayd show-gii Ibrahimic maadaama oo aanu hore qof kale maya ugu odhan wuxuuna yidhi: “Waxay ahayd bilawgii show-ga Ibrahimovic, sababtoo ah muu jirin qof maya ku yidhi Zlatan, ugu dhawaan waxaa ahaa mid kaliya”.
Garsoore hore Chapron ayaa Ibrahimovic ka doonayay in si ixtiraam leh uu ugu sheego in uu kubbada siiyo balse waxa uu ka cadhooday in suulka iyo fartiisa uu isku dhuftay isla markaana uu kubbada ka dalbaday taas oo uu xidiga reer Sweden ka dhaqaajiyay.